श्रृङ्खलाको उत्कृष्ट १२ को यात्रा, यत्तीमै चित्त वुझाउने त ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityश्रृङ्खलाको उत्कृष्ट १२ को यात्रा, यत्तीमै चित्त वुझाउने त ?
श्रृङ्खलाको उत्कृष्ट १२ को यात्रा, यत्तीमै चित्त वुझाउने त ?
December 16, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Feature News, Gossip, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपालले मिस वल्र्डमा ठूलो फड्को मार्न सकेको छैन । विगत केहि बर्षदेखि मिस वल्र्डमा नेपालको सहभागीता निरन्तर रहेपनि फड्को मार्न भने नेपाल असक्षम छ । मिस वल्र्डमा जानु अघि सहभागीहरुले नेपाललाई जिताउने र चिनाउने कुरा त गर्छन्, तर त्यो बोली बोलीमै सिमित छ ।
तर, यसपटक माहोल अल्ली भिन्न भयो । यसपटक मिस नेपाल वल्र्ड श्रृङ्खला खतिवडा मिस वल्र्डमा भाग लिन पुगेसँगै उनले जुन खालको हाइप, संचारमाध्यममा कभरेज पाइन् त्यो अरुले पाएका थिएनन् । यसको पछि श्रृङ्खलाको खुबी थियो या राजनीतिक रंग,पछि चर्चा गरौला ।
तर, नेकपाका नेताका छोरी नभएको भए श्रृङ्खलाप्रतिको चासो जुन तरिकाले आम मानिसमा बढेको थियो त्यो नबढ्न पनि सक्थ्यो । किनकी, पूर्व मिस नेपाल इशानी श्रेष्ठ पनि मिस वल्र्डको उत्कृष्ट १० सम्म पुगेकी थिइन् । तर, उनले श्रृङ्खलाले जस्तो चर्चा पाइनन् ।
श्रृङ्खलाले जस्तो चर्चा पाइन्, उनको प्रस्तुति पनि त्यसको नजिकै रहन पुग्यो । यसपटक उनी उत्कृष्ट १२ सम्म आइपुग्दा मिस वल्र्डको सबैभन्दा पावरफूल टाइटल ब्यूटी विथ प्रपोज जितिन् । यो उनका लागि मात्र नभई मिस वल्र्डको इतिहासमै नेपालका लागि उपलब्धी मुलक नै थियो ।
खतिवडाले अन्नपूर्ण होटलमा संवाददाताहरुसँग आफूलाई यो टाइटल जित्न नपाएकोमा खल्लो लागेपनि नेपाललाई चिनाउन पाएकोमा भने खुशी व्यक्त गरेकी छिन् । यसपटक नेपाललाई विश्व मञ्चमा धेरैले चिन्ने मौका पाएको उनको भनाई छ । आफू मिस वल्र्डमा सहभागी हुन पुगेको ३–४ दिनमा नै नेपाल भन्ने देश त्यहाँका प्रतिस्पर्धीमाझ परिचित भएको श्रृङ्खलाको भनाई छ ।
श्रृङ्खलाले मिस वल्र्डको अन्तिम ५ मा आफू पुग्न नसकेको कारण आफूलाई पनि थाहा नभएको बताएकी छिन् । किनकी, यसको अन्तिम ५ मा पुग्नका लागि आफू कुनै पनि कोणबाट कमजोर नरहेको पनि उनको कुरा छ ।
श्रृङ्खलाले यसो भन्दै गर्दा उनीपछि मिस वल्र्डमा जाने सहभागीलाई अब नेपाल चिनाउन सजिलो बनाएर आफू आएको आशयको भनाई पनि उनको थियो ।
श्रृङ्खला खतिवडा टप १२ मा पुग्नु र यो खालको चर्चा पाउनु आफैमा उपलब्धि हो । तर, यत्तीमा मात्र चित्त वुझाउने ठाउँ छैन । किनकी, लामो समयसम्म नाम त्यसकै रहन्छ जसले नम्बर १ को पोजिशन पाउँछ । श्रृङ्खलाले अब आफूले चेपाङ बस्तीका लागि अघि बढाएको हेल्थपोष्टको कामलाई अघि बढाउने बताएकी छिन् । यो काम पुरा गरेर अस्पतालको अनुहार नदेखेका चेपाङहरुलाई उनले उपचार गराउने व्यवस्था गरिन् भने उनका लागि मिस वल्र्डको टाइटल भन्दा ठूलो उपलब्धी यो हुनेछ ।
श्रृङ्खलापछि आउने मिस नेपाल वल्र्डले पनि यस्तै साथ र सहयोग पाउनेछन् भन्ने विश्वास गरौ । किनकी, विश्व सुन्दरीको मञ्चमा पुग्ने प्रतिस्पर्धी कुनै दलको नेताको छोरी वा अन्य विशेषणले परिचित गराउनुभन्दा पनि सिंगो नेपालको राजदुतको रुपमा परिचित गराएर त्यही अनुसारको सहयोग गर्न सके नेपालले कुनै दिन ताज पक्कै ल्याउनेछ ।
‘द ब्रेकअफ’को ठाउँमा अनमोलको क्याप्टेन
miss nepal Shrinkhala Khatiwada
अनमोललाई पछि पार्दै अशोक दर्जीको ‘चौरीको चाम्रो छुर्पी’
मिडियाको साथ मात्र खोज्ने कि आफूलाई पनि ब्रान्डिङ गर्ने ?
December 20, 2018 sutraentertainment Event, Feature News, Gossip, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- मिस वल्र्डमा सहभागी हुनका लागि चीनमा रहँदा मिस नेपाल वल्र्ड श्रृङ्खला खतिवडालाई कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तसँग तुलना गरेर हेरिएको थियो । मिस वल्र्ड नेपालले संभवत पहिलो पटक मिस वल्र्डमा […]